International Bank Accounts uye International Banking
An International Bank Account iakaundi rebhangi kune imwe nyika kunze kweiyo mauri mugari. Banking yenyika, kana kuti offshore bank account, inowanzoreva nhoroondo dzinovhurwa munzvimbo dzemari dzakadai sedzimwe yezvitsuwa zveCaribbean, Cyprus, Luxembourg kana Switzerland. Izwi rekuti pemvura yakatanga kuGreat Britain uye yekutanga yainoreva kumabhangi aive asiri ikoko. Maererano neseduramazwi reMerriam-Webster, kutsemuka kunoreva "kugara kana kushanda kune imwe nyika."
Zvichida zvakangoita se50 muzana yemari yepasirese inoyerera kuburikidza nemabhangi ekunze. Iyi mabhenji anotonga anopa kuvanzika kwakakura, mutemo wakasimba wekudzivirira uye kuwanikwa kwepasipo padhipiti yako. Vanhu vanowanzo shandisa mabhangi epasi rese kuchengetedza zvinhu kubva kumatare edzimhosva, kana zvosanganiswa nedhiri rekutengesa kana kambani.
Offshore Bank Bhuku rekuvhura
Kuvhura account rebhanga repasi rese hakuna kusiyana zvakanyanya kupfuura kwawaive uchivhura account yako yepamba. Iwe unongoda kupa mamwe mashoma mamwe magwaro. Iwe unopa yako ruzivo rwemunhu uye chitupa, chirevo kana maviri uye yako yekuvhura dhipoziti. Paunovhura account kubhengi kune dzimwe nyika, mabhangi anowanzoda kopi yakanyorwa pasipoti yako. Uye zvakare, iwe uchazoda chiratidzo chekuti ugare, sekudhara bhaiza, pakati pezvimwe zvinhu zvishoma. Izvo zvinhu iwe zvaunoda kupa zvinoenderana nezvinodiwa nesangano uye zvemunharaunda uye zvemukati mitemo.
Bhanga remhiri kwemakungwa rinogona kukumbira marekodhi kubhengi rako razvino. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine account kubhengi kune rimwe bhanga, bhanga rekunze rinokuona seusinga panjodzi. Izvi zvinodiwa zvinowanzogutswa nekugadzira tsamba yekureva kubva kubhengi raunoshandisa parizvino.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, bhangi rekune dzimwe nyika rinogona kuda kuratidza kwainobva mari iri muaccount. Ivo vanogona kutarisa rudzi rwekutengeserana kwaunotarisira kushandisa. Izvi ndezve kuchengetedzwa kwebhangi. Chikonzero ndechekuti mabhanga emhiri kwemakungwa ari kudzvanywa zvakanyanya kuti vasaite zvisiri pamutemo. Zvikasadaro, ivo vanozvipinza mungozi yekuwanikwa kune faindi kana kurasikirwa rezinesi ravo rebhangi.
Uchapupu hweNzvimbo yeChikwama
Kana iwe uri mushandi, dhiri rekubhadhara rinofanira kuratidza kugutsikana kwehomwe yemari. Mari kubva pazvivakwa kana kutengeserana bhizinesi ingangoda humbowo hwekubva kuburikidza nezvibvumirano, magwaro ekuvhara uye nezvimwe zvakadaro. Tsamba kubva kukambani yeinishuwarenzi inofanira kukwana painenge ichiisa mari kubva kune inishuwarenzi chibvumirano. Kana iyo mari yakagarwa nhaka, muurayi kana wega maneja wefa anogona kutumira tsamba kubhanga. Iyo yekumhiri kwebhangi inogona kubvunza nezve yako mari yekudyara uye kwaunochengeterwa yako mari.
Mukana wekuva nekambani yeOssshore kambani yako ndeyekuti tinofanirwa kukwazisa. Nekudaro, tinogona kugadza account yako kwauri mumatunhu mazhinji pasina iwe unoda kuenda kunze kwenyika.
Offshore Banking Tips & Mazano
Kana iwe uchibhengi yepasi rese iwe uri kutora mukana wakasiyana siyana wekubatsirwa kwenyika dzekunze. Mune dzimwe nyika offshore banking kuvanzika kunobatwa zvakanyanya, kupa ruzivo kune mapato asina kubvumirwa imhosva kune vashandi vebhangi. Iyo account yebhengi yepasi rese inogona kuve chinhu chikuru chekuvanzika. Kuti uwedzere kuvanzika kwako kwemari, iwe unovhura iyo bank account muzita reimwe kambani yekune dzimwe nyika.
Iyo mibairo yemitero yaunofarira inoenderana nenyika yako. Vanhu veUS, semuenzaniso, vari taxed pamari yenyika. Iyo UK, Canada neAustralia inopa mutero vagari vayo zvisinei nenzvimbo yeakaunti. Saka zvakakosha kuti utevedze mitemo uye utore mutero uye nemutemo zano.
Nekuti mari yekushandisa inowanzo kuve yakaderera, mabhangi ekunze anowanzo kupa zviyero zvepamusoro kudarika mabhangi epamba. Offshore mabhangi anogona kupa chengetedzo kana iwe uchigara munyika ine isina kugadzikana mari kana zvematongerwo enyika nharaunda. Kana ariyu, kuisa mari yako kumahombekombe ndiyo imwe yenzira dzakanaka dzekuchengetedza mari yako. Une hanya nemutongi wemunharaunda achisunungura maakaundi ako ebhengi? Izvo zvinowanzoomerwa zvakanyanya kuita kana mari yako ichiitirwa kubhanga rekune dzimwe nyika.
Vanhu vazhinji vane shamwari nehama kuhama dzekunze. Offshore account inzvimbo dzakanaka dzekubata mari kana iwe uchida kutumira mari kwavari. Zvichida mudiwa anogara kune imwe nyika akusiira iwe nhaka. Kana zvirizvo, kuvhura account munyika iyoyo ndiyo nzira yakapusa yekuwana mari yako. Iwe unofamba zvikuru kuenda kune dzimwe nzvimbo kuenda kunze kwenyika? Ungangoda kudzivisa kutakura yakawanda mari iwe parwendo. Nekudaro, iwe unogona kusarudza kune imwezve bhangi rekunze account pachinzvimbo.
Nei Uchifanira Kuzarura Akaunti yeAgasitore?
Maakaundi emubhengi epasi rose anochengetedzwa nemakambani ari kunze kwemakungwa uye / kana kuvimba anopa zvakanyanya mukudzivirira kweasiti. Kana matare emunharaunda mako akati "vapa mari," mutengesi wepamhepo anogona kuramba kutevedzera. Ndokusaka iyo bhengi repasi rose account ine offshore asset dziviriro trust ndiyo yakanyanya kusanganisa.
Kubhengi kumahombekombe inzira yakanaka yekutora mukana mune dzekudyara nedzimwe nyika mikana. Sangano iri rinovhura maakaundi ebhengi mumatunhu ese makuru epasi rose uye anoita sean inotanga kukodzera kune mabhanki akasimba eSwitzerland.
Imwe yemaonero akasimba ekutanga kambani yekubhuroka rebhangi ndeyekusiyanisa. Iro-yakatenderedzwa zvakanaka potefolio inowanzo kuve nematura, zvisungo, zvivakwa, simbi dzinokosha uye nezvimwe zvakadaro. Ndokunge, kusiyanisa asset kuri kuwedzera zvinoreva kungoisa mari yako mumakirasi akasiyana efa. Zvinorevawo geographic uye geopolitical diversation, iyo iwe yaunokwanisa kubudirira uine nechero bank account. Ramba uchifunga kuti ikozvino US yenyika chikwereti chiri zvachose-nguva yakakwira, inodarika $ 22 trillion seyakanyora iyi. Nhamba idzodzo zvinoreva kuti kunyange US iri panjodzi. Iyo UK ndeye £ 2.2 trillion ($ 8 trillion) muchikwereti. France neGermany dzinodarika € 4.5 trillion ($ 5 trillion) muchikwereti.
Nekudaro, kuve nemari kumahombekombe inzira yekuzvipa iwe nekuchengetedzeka kwakanyanya kwemari. Kana mari dzenyika yako dzakamedzwa pasi pegabha rechikwereti chechikwereti, haudi kuti vaende newe. Nekudaro, kana iwe uine mari mumatunhu akachengeteka kana kudonha kwemari kunoitika mudzimba, unenge uri muchimiro chiri nani kupfuura vavakidzani vako. Mushure mezvose, iyo US yakaderedzwa neStandard & Poor nekuda kwechikwereti chayo chakawandisa. Kune chete 16 S&P AAA yakatarwa nyika munyika. US haisi imwe yadzo.
Kusarudza Mari Yako
Kusiyana neakaundi mazhinji eUS, bhangi rekune dzimwe nyika rinokutendera kuti usarudze pakati pemari dzakasiyana kuti ubate mari yako. Vazhinji varimi vanofarira kubata pfuma mumhando dzakasiyana dzemari. Nekudaro, ivo vanokanganisika kana simba rekutenga dhora rikaderera.
Zvisinei, kunyange pane zvakawanda zvakakosha pakusarudza pakati pemari dzakasiyana-siyana, panewo zvinetso. Iwe unogona kuguma uchibhadhara mitero yekunze kune imwe nyika yawanikwa. Kana nyika iyo mari yako yawakaisa nayo inosangana nehupfumi, mari yekudhura inobvira. Izvozvo zvinoreva kukosha kwezvinhu zviri mubhengi rebhangi yako zvingawa. Iko kune nguva dzose mukana wekuchinja kwehurumende munyika, uye kushandiswa kwenyika kunotevera.
Iyo yekupedzisira haina kutarisirwa munyika dzakawanda. Ramba uchifunga kuti nyika zhinji haina cybersecurity simba reUS. Nekudaro, iko kusawirirana kwekusangana nekubiwa kuzivikanwa kana kwakafanana cyber-mhosva dzinowedzera zvishoma. Uye zvakare, nyika zhinji hadzina mitemo yakafanana yekudzivirira yevatengi seUS. Wongorora mitemo yekudzivirira yevatengi yenyika vasati vavhura account yekune imwe nyika. Zvirinani uye, sangana nesangano rine ruzivo pakuvhura maakaunti emahombekombe. Sangano redu ndiro rakakura kwazvo pasi rese pakubatsira vanhu vanoda maaccount ebhengi epasi rose.
Kuchinja imwe mari kune imwe kunogona kazhinji kuchisanganisira kubhadharisa mari. Mari yekutsinhana inoramba iri chinhu chinogara chichiitika mukushandurwa kwemari. Ndokusaka vanhu vazhinji vanoita forex zuva rekutengeserana senzira yekudyara kazhinji vanorasikirwa.
Gamuchira Unyanzvi hweUnhu
Saka, zvikonzero zviri pamusoro zvinotsigira zvakanyanya nei zvichikosha kwazvo kuve nerubatsiro rwehunyanzvi pakuvhura account yekubhanga kwemhiri. Vashandi vedu vanoziva kuti ndeapi mabhangi akabata vatengi vedu zvakanaka. Isu tinoziva kuti ndevapi bhangi rinovhura maakaundi kuvanhu vanogara munyika menyu. Uyezve, kuchengeteka kwebhangi chishuwo chakasimba kune vatengi vedu. Nekudaro, isu tinogara tichitsvaga solvency yemabhangi tisati tavakurudzira. Zvisinei, izvi hazvisi zvese mabhangi zvinoguma zviita semari yemari. Saka nekudaro, pane manhamba ari pamusoro apa ekukurukura zvaunoda nenyanzvi. Neimwe nzira, iwe unogona kuzadzisa fomu yemahara yekukurukurirana pane ino peji.
Unogona kubhadhara mari kubhengi rako rekuchamhembe nekutumira waya kubva kune yako yekubhangi account kune yako yekumhiri. Kune imwechete diki yekutarisa kuendeswa uku kana yaitwa kubhangi rekune dzimwe nyika, uye zvine chekuita nemiripo. Kusiyana neyekufambiswa kwemagetsi kunoitwa pakati pemabhangi epamba, kuchinjirwa waya dzimwe nguva dzimwe nguva kunosanganisira mari dzinopihwa mutengi kunyangwe mari inotumirwa kana kugamuchirwa. Iko hakuna mubhadharo wakajairika, saka vangangove vatengi vebhengi repasi rose vatengi vanofanirwa kutsvaga masangano anopa zvibvumirano zvakanakisa. Nekudaro, mabhangi ekunze haashandise mashoma (cheki). Saka, sarudzo dzakanakisa ndeyokuchinjisa waya.
Kubvisa mari kubva kumaakhawunti ako okune dzimwe nyika kuri nyore. Izvi zvinodaro nekuti bhengi rako rinofanirwa kukupa iyo ATM kana kadhi rekubhengi. Nenzira iyoyo, mari yako inowanikwa zviri nyore pasi rese. Iye zvino, idzi shanduko dzinoitirawo mari inobhadharwa. Kashoma, bhangi rekune dzimwe nyika rinopa cheki, asi iyi haisi nzira yakakodzera yekubvisa mari kune vatengi vazhinji. Kana bhangi rekune dzimwe nyika rikaongorora mutengi, chakavanzika chinodzikira. Zvakaomawo kutora mari cheki inokwevera kubhanga rekunze mukati. Uyezve, kubhadhara cheki yakadaro kungangoda nguva yakareba yekumirira.
Imwe yakanaka yakanaka yekushandisa maakaundi maviri, mubhangi remusha nemakungwa, zvakateerana. Via kutumira waya, unogona kutumira mari kubva kuaccount account yako kubhangi repamba. Saka kuwana mari yako haisi nyaya. Iwe uchiri kunakidzwa nekuvanzika kunopihwa nechero iro rako kubhengi account uchishandisa mukana wepamhepo bhangi repamba.
Paunenge uchitsvaga paakaundi yemahombekombe, tora mitero yemuno. Mabhangi mazhinji ekumahombekombe atinoshandisa haaomesere mutero wekunze kumaakaunti ekunze, vamwe vachidaro. Semuenzaniso, kana iwe ukabata account muSwitzerland mumadhora ekuAmerica hapana mutero muSwitzerland. Kana munhu akabata account muSwitzerland Franc, muridzi weakaunti anobhadhara mutero weSwitzerland kune iyo purofiti.
Nekudaro, izvo zvinogona kureva kuti unopedzisira wave kubhadhara mutero kwete chete kune yako nyika, asi kune nyika yauri kubhengi. Kazhinji, iwe unotora kubvisa mutero wekune dzimwe nyika kubva kune yako yemitero dhiri, saka mhedzisiro kazhinji haupindirani.
Akaundi yenyika kubhengi ndeimwe kurudzi rwuri kunze kwemiganhu yenyika yako. Yakasanganiswa neyakavharwa kwemidziyo asset kuchengetedzwa kuvimba ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekuchengetedza izvo zviri zvako. Offshore mabhangi anochengetedza marezinesi avo nekutevedzera zviri pamutemo zvinodiwa kuziva-kwako-mutengi mitemo. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kupa zvinyorwa zvepamutemo izvo kubhengi zvikumbiro.
Kushandisa mari iri muaccount yako yakareruka sekupeta kadhi rebhangi. Kutumira uye kugamuchira mari kubva kubhengi rako rebhanga renyika zviri nyore sekutora waya.
Iwe unoda kuvhura account yekubhanga rekunze? Kana zvirizvo, ndapota shandisa nhamba dzefoni pamusoro apa. Iwe unogona kuzadza fomu pane ino peji kune rumwe ruzivo zvakare, maawa e24 pazuva.
To chitsauko 4>